PressReader - Ilanga: 2017-11-06 - Kunzima emndenini wophila ngochatho
Kunzima emndenini wophila ngochatho
Imali yempesheni kuthiwa idliwa yisihlobo
Ilanga - 2017-11-06 - Izindaba - NOMFUNDO NGWANE nomfundo@ilanganews.co.za
UDONSA kanzima owesifazane osekhulile wakwaH eMlaza, eningizimu yeTheku okhubazeke ngokomqondo, imali yakhe yempesheni okuthiwa idliwa yisihlobo sakhe njengoba engasakwazi ngisho ukuya esibhedlela eyolanda amaphilisi okuthithibalisa ukugula kwakhe.
Kuthiwa lesi sihlobo esihlala kwenye indawo siyithumela mhla kuthanda sona imali yempesheni kaNkz Nonhlanhla Sibiya (60), kwesinye isikhathi siyithumele ingaphelele.
Lokhu sekudale ukuba impilo kaNkz Sibiya ohlala nenkosikazi kamfowabo ongasekho (skwiza), uNkk Mavis Sibiya namadodana akhe bathwale kanzima njengoba engasawadli amaphilisi okuthithibalisa ukugula okwenza ukuba kungalawuleki (ukugula).
Kuthiwa njalo uNkk Sibiya uvuka ekuseni ngovivi ngaphambi kokuba aye emsebenzini, achathe uNkz Sibiya enzela ukuba angazikhululi emini uma esesele nezingane. Kuthiwa uNkz Sibiya akakwazi ukusho uma esefuna ukuzikhulula, umane azikhulule noma yikuphi uma sekumfikele.
Enjalo nje, uma esendlini ugangise okwengane encane, ubulala izimpahla udla noma yini eseduze kwakhe. Kuthiwa uNkk Sibiya obesekhathele wukuhlale ephipha indle abehlale eyifica isaphazeke igceke lonke nasendlini, unqume ukuba njalo ekuseni ngaphambi kokuba aye emsebenzini aqale ngokumchatha ukuze engeke azingcolise.
Kuthiwa uma eseqedile ukumchatha, umvalela egaraji uma eseya esebenzini ngoba uma esele endlini babuya zonke izinto zibheke phezulu. Kuthiwa lesi sihlobo esihola imali kaNkz Sibiya yempesheni kasifuni ukunikeza uNkk Sibiya ikhandi likagogo lokuhola.
ILANGA lizibonele isimo esinzima aphila ngaphansi kwaso uNkz Sibiya. Uma ethole ithuba lokuphuma egaraji uvula nemigqomo ebheka okokudla. Udinga ukuhlale egadiwe.
“Umama uthwele kanzima njalo ekuseni ngaphambi kokuba aye emsebenzini uqale aphiphe indle kababekazi. Uma engakwenzanga lokho, indle angayifica inaphazeke igceke lonke.
“Okubuhlungu ubabekazi akasakwazi ukuyolanda amaphilisi esibhedlela ngenxa yokuthi imali yakhe yempesheni kuke kwenzeke ingafiki noma ifike seludlulile usuku okumele aye ngalo esibhedlela,” kusho uMnu Thalente Sibiya.
Uthi kwesinye isikhathi uma uyisekazi esezingcolisile unina engakabuyi emsebenzini, kuyaphoqeleka ukuba bamshintshe kusuke sekunuka indlu yonke. UNkk Sibiya uveze ukuthi uNkz Sibiya uqale ukuhlala naye ngemuva kokushona kukaninazala.
“Ngimthathe ekade ehlala KwaMaphumulo ngenxa yokuthi bekungasekho muntu ozomgada. Sengihambe yonke indawo ngizama ukumtholela ikhaya labantu abadala ukuze athole ukunakekelwa okukahle kodwa lutho, bayangichitha.
“Sengizamile nokulubika udaba lwemali yakhe yempesheni ukuthi iholwa ngomunye umuntu ongahlali naye kodwa kangisizakalanga. Sengize ngathatha isinqumo sokuba ahlale ekhaya angabe esawalanda amaphilisi akhe esibhedlela ngenxa yokuthi kanginayo imali yokumgibelisa,” kusho uNkk Sibiya.
Uthi ubamba amatoho okuziphilisa yena nomndeni wakhe. Utshele ILANGA ukuthi uyafisa ukuthola usizo ukuze uNkz Sibiya athole ikhaya labadala, lapho ezonakekelwa kahle khona adle nemishanguzo yakhe yokuthithibalisa ukugula.
Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uMnu Vukani Mbhele, uthe bazolusukumela udaba lukaNkz Sibiya babheke ukuthi angasizakala kanjani kule nkinga abhekene nayo.
UPHILA ngokuchathwa ukuze angeke azikhulule noma yikuphi uNkz Nonhlanhla Sibiya (60) okhubazeke ngokomqondo, ongakwazi ukusho uma esefuna ukuzikhulula.